ကေအိုင်စီ » မြစ်ကြီးနား၌ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ ဆန္ဒပြ
မူလစာမျက်နှာ » သတင်း
မြစ်ကြီးနား၌ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ၂၀၀၀ ဆန္ဒပြ
Submitted by admin on Friday,6July 2012One Comment
ဇူလိုင်လ ၆ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ နန်းယဉ် (ကေအိုင်စီ)
ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ ဂျာမိုင်ကောင်းစစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်အား လွှတ်ပေးရန် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဦးရေ ၂,၀၀၀၀န်းကျင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်သည် ဂျာမိုင်ကောင်းခရစ်ယာန်အသင်းတော် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းရှိ ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းအား ဗုံးဖေါက်ခွဲ မှု စွဲချက်ဖြင့် ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့တွင် မြန်မာအစိုးရအာဏာပိုင်တို့က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုလို ဆန္ဒပြရာတွင် ယင်းဂျာမိုင်ကောင်းစစ်စခန်းရှိ ဒုက္ခသည်များအပြင် ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာတော်များနှင့် ဒေသခံများလည်း ပါဝင်ကြောင်း ဆန္ဒပြမှုကို ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရသူ မြစ်ကြီးနားမြို့ခံတဦးက ယခုလို ပြောသည်။
သူက “ဒီမနက် ၆နာရီလောက်က စပြီးတော့ လူတွေစုကြတယ်။ ပြီးတော့ ချီတက် ဆန္ဒပြကြတယ်။ လူတွေ နှစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက် ရှိမယ်။ သူတို့ အဓိက တောင်းဆိုတာကတော့ ဖမ်းထားတဲ့ ဒုက္ခသည် ဦးဘရန်ရှောင်ကို လွှတ်ပေးဖို့ပါ”ဟု ပြောသည်။
၎င်းအပြင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းသို့ အဓမ္မဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တို့၏ လုံခြုံရေးနှင့် ဘဝရှင်သန်ရေးတို့အတွက် ထိရောက်သည့်အကူအညီပေးရန် စသည့်အချက်များကိုလည်း ဆန္ဒပြသူများက တောင်းဆိုခဲ့ သည်။
“ဦးဘရန်ရှောင်ကို စဖမ်းတုန်းကတော့ ဖေါက်ခွဲမှုနဲ့လို့ပြောတာပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုက မတရားအသင်း၊ ပြောရရင် KIO နဲ့ ဆယ်သွယ်တယ် ဆိုပြီးတော့ ဖမ်းထားတယ်”ဟု ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး-ထိုင်းနိုင်ငံ(KWAT) တာဝန်ခံ မွန်းနေလီက ပြောသည်။
ထို့အပြင် Ethnic Voice of Burma (EVB) ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာ၌ ဦးလထော်ဘရန်ရှောင်ကို ဗုံးဖောက်ခွဲမှုဖြင့် စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း ယခုတွင် မတရားအသင်းဆက်သွယ်မှု ပုဒ်မ (၁၇/၁) ဖြင့် စစ်ဆေးနေသည်ဟု သတင်းဖော်ပြထားသည်။
GOBI FROG said: What about all Karen religions groups. What their political views on future??? and NOTHING,?????. Now Burman know that the Kachin political common grounds are higher than the Karen.
- 8 July 2012 at 3:51 am Leave your response!
“မိမိတို့၏ အမြင်များကို လွတ်လပ်စွာ ရေးသားဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ သို့သော် လူမျိုးရေးအရထိခိုက်မှု၊ ဘာသာရေးအရ ထိခိုက်မှု၊ လူ့ယဉ်ကျေးမှုအရ
ထိခိုက်မှုများ ပါဝင်သည့် အသုံးအနှုံးများကိုမူ ဆင်ခြင်ပေးစေချင်ပါသည်။ မိမိအခွင့်အရေးကို လိုလားပါက တစ်ဖက်သား၏ အခွင့်အရေးကိုလည်း လေးစားသင့်ပါသည်။” Please come to visit www.facebook.com/kicnews
Recent Commentssuesharaung on ကယားပြည်နယ်အတွင်း ဒေ သခံအချို့ အစိုးရဌာနအပြင် KNPP သို့ အခွန်ငွေပေးဆောင်ရpnwara on ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက် မည်ကို မိကရင်ရှိသံဃာနှင့် လူထု(၁၄၀၀)ကျော်ကန့်ကွက်သံလွင်ခက် on ဘိလပ်မြေစက်ရုံတည်ဆောက် မည်ကို မိကရင်ရှိသံဃာနှင့် လူထု(၁၄၀၀)ကျော်ကန့်ကွက်U Thein Win on ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် ပထမ ဦးဆုံးအကြိမ် စတင် ထုတ်ဝေတော့မည်Sa on အယ်ဒီတာ့အာဘော်Agga on ဘုရင့်ညီနောင်ဂူ ဘုရားဖူးများ နေ့စဉ် လာရောက်လည်ပတ်ကိုစော on အသက်မပြည့်ဘဲ စစ်သား အဖြစ် ခေါ်မိသူကို KNU ပြန်လွှတ်ပေးsawnay on မာယာတွေပေါ်မှာ သွေးပျက်ပြီးတော့ အိပ်မနေနဲ့s'Maung Chain on မေလကုန်တွင် ၉ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ် ပွဲ ကျင်းပမည်thanshwe on မေလကုန်တွင် ၉ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားစည်းလုံး ညီညွှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ် ပွဲ ကျင်းပမည် Send to Email Address
Post was not sent - check your email addresses!	Email check failed, please try again	Sorry, your blog cannot share posts by email.	Copyright © Karen Information Center |